Kudonhedza kuona, Pro modhi pane maMac, uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
Kudonhedza kuona, Pro modhi pane maMac uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Isu tinopinda pakati paAugust uye zvinoita sekunge nhau nezveApple iri kuwedzera mumaawa ekupedzisira. Isu takagara tichifunga kuti Apple inogadzira nhau iri yega asi ichokwadi kuti tine zvakawanda uye zvimwe zvakawanda nezve zvingave zvitsva zvigadzirwa, kudonha, runyerekupe uye dzimwe nhau maererano nekambani yeCupertino.
Nhasi iSvondo, Ndira 19 uye zvishoma nenhau diki dzine chekuita neApple dziri kusvika, saka nhasi tinoda kugovana newe dzimwe dzenyaya dzakakurumbira kubva kuApple dzatakaburitsa muNdiri kubva kuMac. Zvakanakisa zvevhiki.
Tichatanga nenhau dzeApple Watch uye kudonha kwayo kwekuona basa iro svondo rino nhau dze mutyairi webhasikoro akarohwa nemotokari yakarova. Mune ino kesi, wachi yakangoerekana yafona kumabasa ekukurumidzira kubvira munhu akakuvara akasara afenda pasi.
Tinoenderera mberi MacBook Pro modhi kubva kuApple. Uye zvinoita sekunge kodhi yawanikwa mune yazvino macOS Catalina Beta iyo inogona kuita kuti Mac yako isanganisira Pro modhi yakamisikidzwa nekusunda kwebhatani.
Chimwe chiitiko chakakosha svondo rino kwave kuwanikwa kwe iyo webhusaiti: Apple Archive. Iyi yedhijitari webhu-miziyamu ine nhoroondo yekambani iyo inowedzera nhevedzano yeruzivo yakaunganidzwa pamwe mavhidhiyo uye zvinyorwa zvakasiyana izvo zvinoreva Apple. Tarisa pazviri, iwe uchazvida.
Pakupedzisira tinoda kugoverana zvakare nemi mose nhau dzinoreva iyo Xnor.ai kambani iyo ichangobva kuwanikwa neApple. Isu tajaira kutenga makambani naApple asi izvi zvinokodzera kutaurwa kwakakosha tichifunga huwandu hwenhau dzatinadzo nezvehungwaru hwekunyepedzera, Apple magirazi akachenjera, Apple Watch, nezvimwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kudonhedza kuona, Pro modhi pane maMac uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Kurekodha uye kuyerera bhero remukova rinoenderana neKeanKit
"Asphalt 9: Ngano" ikozvino yavapo kusvina Mac Catalyst